Maydka Taliyihii Ciidanka nabad galyada wadooyinka oo Muqdisho lagu Aasay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maydka Taliyihii Ciidanka nabad galyada wadooyinka oo Muqdisho lagu Aasay
Maydka Taliyihii Ciidanka nabad galyada wadooyinka oo Muqdisho lagu Aasay
Allaha unaxariistee taliyihii Ciidanka ilaallada nabadgalyada wadooyinka ee Trafico Gen Cali Maxamed Cali “Cali Shariif oo maalmihii dambe ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho ayaa saaka ku geeriyooday Caasimada waxaana aaskiisa ka qayb galay mas,uuliyiin ka tirsan Dowladda.
Xubnaha Mas’uuliyiinta ka qayb galay aaska Marxuumka waxaa ka mid ah Wasiirka Warfaafinta dhaqanka iyo Dalxiiska Eng Yiriisow sii hayaha taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya iyo saraakiisha ciidanka waxaa ay ka tacsiyeeyeen geerida ku timid Marxuumka.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Caasimada Taabit Cabdi Maxamed ayaa Bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan qooskii uu ka baxay uga tacsiyeeyay marxuumka Gen Cali Shariif waxaana uu allaah uga baryay inuu u naxariisto.
Gen Cali Shariif waxaa uu u geeriyooday Cudurka Canserka oo uu in mudo ahba la xanuunaa horay waxaa uu u soo noqday taliyaha qaybta guud ee Booliska Gobolka Banaadir waxaana uu xilka Traafikada kala wareegay Taliyihii Hore Gen Cali Gaab.
Previous articleMilitariga Soomaaliya oo howlgal ku dilay maleeshiyaada katirsan Arggagixisada Shabaab
Next articleGolaha Wasiirrada oo ansixiyay xeerka siyaasada dhalinyarada Qaranka